Fampiharana tena ilaina 5 ho an'ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra manaraka | Vaovao momba ny dia
Fampiharana tena ilaina 5 ho an'ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra manaraka
Ny teknolojia vaovao dia nanova ny fomba fitetezam-paritany ary lasa mahazo aina sy tsotra kokoa. Ny finday avo lenta finday dia mpiara-dia lehibe amin'ny diantsika ary manampy antsika hanao ny ankamaroan'ireo rindranasa natokana ho an'ny fizahan-tany izay mandray anjara amin'ny fanaovana ny dia ataonay ho traikefa tsy hay hadinoina.
Anisan'ireo fampiharana marobe natokana ho an'ny fizahantany, amin'ny lahatsoratra manaraka dia hasongadinay ny 5 izay hanampy anao amin'ny fotoana samihafa mandritra ny fialantsasatrao. Amin'izany no ahafahanao manomana tsara kokoa ny dia ary mamaha ireo hetsika kely tsy ampoizina mety hitranga. Nanomboka izahay!
1 XE Vola
4 OMG afaka misaintsaina aho!
Rehefa mikarakara fialan-tsasatra ianao, impiry ianao no nijery ny tahan'ny fifanakalozam-bola amin'ny volan'ny firenena halehanao? Azo antoka fa efa andro maro talohan'ny dia, manandrana manapa-kevitra hoe rahoviana no fotoana mety indrindra hiovana.
XE Currency dia rindrambaiko lavorary haharaka ny tsenan'ny vola: ohatrinona ny tsirairay amin'izy ireo no mifandraika amin'ny volanao ary inona ny fivoarana nananany tato anatin'ny andro vitsivitsy.
Ity rindrambaiko ity dia manolotra taham-panakalozana sy latabatra voarakitra eo noho eo ary mitahiry ny tahan'ny fifanakalozana vaovao farany aza mba hiasa na dia tsy misy aza ny internet.
Ity rindranasa ity dia ahafahantsika misintona torolàlana momba ny fizahan-tany feno sy amin'ny antsipiriany izay hahazoanay vaovao momba ilay tanàna hotsidihina Mifandraika amin'ny fisarihana, tranombakoka, trano fisakafoanana, hotely, teatra sy fivarotana misy tsikera mahasoa, vidiny ary fandaharam-potoana.
Ny mTrip dia manana mpitari-dia mihoatra ny 35 fa mamela ny fampidinana topi-maso maimaimpoana fotsiny, noho izany dia mila mandoa 3,99 euro ianao hahazoana ilay torolàlana fizahan-tany feno. Na izany aza, mendrika izany amin'ny kalitaon'ny atiny.
Ao amin'ity rindrambaiko ity dia misongadina ny safidy El Genio de Viaje, izay mamorona mandeha ho azy ny zotram-pifandraisana manokana arakaraka ny tombotsoanao, ny dia lavitra, ny datin'ny dia, ny toerana, ny toerana sy ny fotoana fanokafana orinasa, ary koa ny fanombanana ireo mpandeha hafa. Mampiasà famandrihana marani-tsaina mba handaminana indray ny fitsidihana sy hanamboaranao ny làlan-kalehanao amin'ny fotoana rehetra.
mTrip dia 100% ivelan'ny Internet ka tsy mila fifandraisana Internet afa-tsy ny fizarana sy fanavaozana. Izy io koa dia manana diary fitsangatsanganana hamoronana sy hizarana mora foana ireo rakitsoranao amin'ny hotely, sary ary hevitra.
Sary | Smartblog
Hita amin'ny Android sy iOS, Foodspotting dia rindrambaiko tena mahaliana izay, tsy toy ny fampiharana mahazatra na tranokala manangona hevitra momba ny trano fisakafoanana, mamela antsika hahafantatra hoe iza no sakafo matsiro indrindra sy sarobidy indrindra amin'ny manodidina na faritra ahitantsika ny tenantsika mandritra ny diantsika. Noho izany, rehefa mandeha manafatra any amin'ny trano fisakafoanana isika dia ho afaka hahafantatra raha tena mendrika ny laza ananany na tsia ny lovia iray.
Ao amin'ny Foodspotting dia azonao atao ny manome soso-kevitra momba ireo lovia tianao indrindra sy maka azy ireo mba hahafantaran'ny mpampiasa hafa ny zavatra niainanao. Lovia efatra tapitrisa mahery no natolotra an'izao tontolo izao noho ity rindrambaiko ity ary ireo mpitety sakafo indrindra no faly amin'izany.
OMG afaka misaintsaina aho!
Ireo izay mijaly noho ny tahotra ny hisidina na ny fanomanana diany dia miteraka fihenjanana be dia be dia hahita OMG azoko refesina! ny mpiara-dia aminao indrindra.
Ity fampiharana ity no fomba mora indrindra hianarana misaintsaina. Noho ny fandaharam-pahatsiarovan-tena sy ny teknika fisaintsainany dia afaka manaisotra ny adin-tsaina sy ny tebiteby ateraky ny tahotra ny manidina na miomana amin'ny dia isika. Amin'izany dia ho afaka hitondra fahasambarana bebe kokoa amin'ny fiainantsika isika ary hanomboka ny fialantsasatra amin'ny tongotra ankavanana.
Ankoatr'izay, io fampiharana io dia miady amin'ny fikorontanan'ny torimaso ary manampy amin'ny fanatsarana ny fifantohana amin'ny folo minitra isan'andro fotsiny. Azo ampiasaina amin'ny finday avo lenta na solosainao izy io ary maimaim-poana. Hita amin'ny Google Play sy iTunes izy io.
Ny iray amin'ireo nofy ratsy indrindra azon'ny mpandeha atao dia ny fanafoanana ny sidiny, ny fahatarana, ny fifandraisana very na ny famandrihana loatra rehefa hanomboka ny fialan-tsasatra izy. Tsy isalasalana fa, asa mandrahona ny hanaisotra ny fifaliana sy ny fitoniana rehetra izay narosonao hivezivezena.
Fampiharana maimaim-poana amin'ny iOS sy Android izay afaka mamonjy anao amin'ny olana dia ny FlyPal. Ny hatsarany lehibe dia ny manolotra ny mpandeha ary amin'ny fotoana tena izy ny safidy azon'izy ireo takiana amin'ireo seranam-piaramanidina raha misy ny olana amin'ny sidina manara-dalàna. Izany hoe mampahafantatra anao ny fiheverana fa tsy maintsy atolotry ny seranam-piaramanidina anao momba ny sidina hafa misy seza, onitra ara-bola na famerenam-bola.
Ankoatr'izay, raha toa ka tsy manome fanampiana sahaza ho an'ny mpandeha ny zotram-piaramanidina, ny manam-pahefana eropeana dia azo ampandrenesina amin'ilay fangatahana mihitsy fa izy ireo no miandraikitra ny famonoana ireo orinasa ireo rehefa tsy manatanteraka ny adidiny izy ireo.
Efa nampiasa ny iray amin'ireo rindranasa ireo tamin'ny dianao ve ianao? Raha tsy izany dia iza no tianao hampiasaina? Fampiharana hafa inona no hatolonao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Fampiharana tena ilaina 5 ho an'ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra manaraka